ठूला र मालदार मन्त्रालयका लागि सचिवहरूको दौडधूप, अबको मुख्य सचिव को ? | NepalDut
ठूला र मालदार मन्त्रालयका लागि सचिवहरूको दौडधूप, अबको मुख्य सचिव को ?
सरकारले आगामी साउनमा केही सचिवको सरुवा गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । साउनपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारी, राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे लगायतका ३ जना सचिव रिटायर हुँदैछन् ।
रिक्त ठाउँमा पदपूर्ति गर्नेक्रममा सरकारले अरु केही सचिवहरूको पनि सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले यस्तो तयारी सुरु गरेको थाहा पाएपछि शक्तिशाली र ठूला मन्त्रालयमा सरुवा हुन सचिवहरूले दौडधूप सुरु गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले साउन पछि केही सचिवहरूको सरुवा गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ । सरुवाका लागि केही सचिवहरुले रुचि देखाएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्याललाई राजस्व सचिवमा लैजान तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपाने गृह सचिव हुन लविङ सुरु गरेका छन् । हालका गृहसचिव प्रेमकुमार राइलाई मुख्य सचिव बनाएर उनको ठाउँमा न्यौपानेलाई ल्याउने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ । तर मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने–नगर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै निष्कर्षमा नपुगेको स्रोतको भनाइ छ ।
मुख्यसचिव परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढ्दै गएको बताइन्छ । गृहमन्त्रालयमा सरुवा हुन अधिकांश सचिवहरूले चासो देखाउने गर्छन् । गृहमन्त्रालयलाई ठूलो र आकर्षक मन्त्रालय मानिन्छ । कमजोर र कम आकर्षक मानिने मन्त्रालयबाट सरुवा भइ ठूला मन्त्रालयमा सरुवा हुन सचिवहरूले चासो देखाएका हुन् ।
त्यसो त, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा पनि ठूलो मन्त्रालयमा जान दौडधूप सुरु गरेका छन् । उनी सकेसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जान चाहेको स्रोतको भनाइ छ । पछिल्लो समय खानेपानी मन्त्री विना मगर र शर्मावीच सम्बन्ध चिसिंदै गएको छ ।
स्रोतका अनुसार खानेपानी मन्त्री मगर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का महाप्रवन्धक महेश भट्टराइलाई हटाउन चाहेकी छन् । सचिव शर्माले भने भट्टराइलाई संरक्षण गरेको बुझाइ मन्त्री मगरको छ । केयुकेलमा खानेपानी मन्त्रालयको ३० प्रतिशत मात्र शेयर छ । त्यसैले मन्त्रीले चाहेर पनि भट्टराइलाई हटाउन सक्दिनन् ।
भट्टराइलाई हटाउन शर्माले सहयोग नगरेको मन्त्रीका मगरको सचिवालयमा बस्नेहरूले निष्कर्ष निकाले छन् । खानेपानी सचिव शर्मा स्वयं पनि खानेपानी मन्त्रालयबाट सरुवा हुन दौडधुप सुरु गरेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयभन्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ठूलो मन्त्रालय मानिन्छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि भूमि व्यवस्था सचिव गोपी मैनालीलाई भूमि व्यवस्थाबाट अन्य ठाउँमा सरुवा गर्न चाहेकी छन् । पछिल्लो सयम मन्त्री अर्यालय र भूमि व्यवस्था सचिव मैनालीवीच सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन । तर प्रधानमन्त्रीले नै मैनालीलाई भूमि व्यवस्थाबाट अन्य ठाउँमा सरुवा गर्न नचाहेको स्रोतको भनाइ छ ।
महिला बालबालिका मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले पनि आकर्षक र ठूला कार्यालमया सरुवा हुन लविङ सुरु गरेका छन् । यसैगरी नेपाल ट्रष्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुर पनि अन्य कार्यालयमा सरुवा हुन चासो देखाएका छन् । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई सचिवहरूले त्यती आकर्षक कार्यालय मान्दैनन्।
ठूला र आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुन सचिवहरूले राजनीतिक कनेक्सन पनि मिलाउने गर्छन् । तर चाँडो चाँडो सरकारले सचिव सरुवा गर्दा अस्थिरता आउने प्रशासनविद्हरू बताउछन् ।
एक प्रशासनविद् भन्छन्, ‘पहिले चाँडो चाँडो मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने गर्थे। अब चाँडो चाँडो सचिव फेरिने गर्छन् ।’ चाँडो चाँडो सचिव सरुवा गर्दा अस्थिरता बढेको गुनासो आउन थालेपछि कम्तिमा १ वर्ष सचिव सरुवा नगर्ने सरकारले नीति बनाएको थियो ।
उक्त नीति कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ । साउन महिनामै केही सचिवहरू फेरबदल गर्ने सरकारले सुरु गरेको गृहकार्यले कम्तिमा १ वर्ष सचिव नफर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयन नहुने पक्का भएको छ ।
सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भइ प्रदेशमा १ मा गएका सचिव सुरेश अधिकारी पनि तत्काल काठमाडौं आइ आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुन लविङ सुरु गरेका छन् । यसअघि उनी संघीय मन्त्रालयमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी लिएका थिए । अधिकारी निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका नातेदार पनि हुन् ।
सहसविचबाट सचिवमा बढुवा हुँदा उसको पहिलो पोष्टिङ काठमाडौं बाहिर हुने परम्परा छ । उक्त परम्परा धान्न अधिकारी प्रदेश १ मा नियुक्त गरिएका थिए। परम्परा थेग्न काठमाडौं बाहिर गएका सचिवहरू १र२ महिना मात्र काठमाडौ बाहिर बस्छन् । १/२ महिनामै काठमाडौमा पर्कन लविङ सुरु गर्न थाल्छन् । त्यसैले प्रदेशमा पठाइएका प्रदेश प्रमुख सचिवहरू (संघमा सचिव) पनि चाँडो चाँडो परिवर्तन हुने गर्छन् ।